အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည သန်းခေါင်ယံကျော် တာနဲ့ ဆောင်းဥတု(ဟေမန္တ)သို့ ကူးပြောင်းလို့သွားပါပြီ။ ဆောင်းဥတုဟာ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၁ ရက် နေ့မှ တပေါင်းလပြည့်ညလယ်အထိ ဆောင်းလေးလဖြစ် ပါတယ်။
မိုးဥတုနဲ့ဆောင်းဥတုအထူးဥတုပြိုင်ကာလမှာ အပူနဲ့ အအေး လေဒေါသနဲ့သလိပ်ဒေါသတို့ အားပြိုင်ကြပြီး ရောဂါဘယတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ မိုးဥတုမှာလေဒေါသ ကြီးစိုးမင်းမူခဲ့တဲ့အတွက် လေစာအခါးအရသာကို သွေး သားက တောင့်တသလို ဆောင်းဥတုအခါမှာတော့ သလိပ်ဒေါသကြီးစိုးမင်းမူတဲ့အတွက် သလိပ်ငြိမ်စာအချဉ် အရသာကို သွေးသားကတောင့်တပါတယ်။
အခုလို ဥတုနှစ်ပါးအားပြိုင်ကာလမှာ ဥတုနှစ်ပါး လုံးနဲ့သင့်မြတ်အောင် အခါးအရသာဖြစ်တဲ့ မဲဇလီဖူးကို ရှောက်ရည်၊ သံပရာရည်တို့နဲ့ချဉ်ချဉ်လေးသုပ်စားပါက ကျန်းမာရေးကိုကျေးဇူးပြုပါတယ်။ မိုးရာသီမှဆောင်းရာ သီအကူးဥတုနှစ်ပါးလုံးနဲ့ သင့်မြတ်တဲ့အတွက် ရောဂါ ဘယမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ သွေး၊ လေ၊ သလိပ်တို့ကို ညီညွတ်မျှတစေပါတယ်။ မဲဇလီဖူးကို အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထား စားသုံးခြင်းဟာ တိုင်းရင်းဆေး ပညာအမြင်နဲ့အလွန်သင့်မြတ်လှတဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ် ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၀ ။ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အစမှ နိုဝင်ဘာလ ပထမအပတ်အတွင်း ကုန်သွယ်ခွန် (သွယ်ဝိုက်ခွန်)၊ ဝင်ငွေခွန် (တိုက်ရိုက်ခွန်)၊ တံဆိပ်ကောင်းခွန် နှင့် အောင်ဘာလေခွန်တို့မှ တစ်နိုင်ငံလုံး အခွန်ကောက်ခံရရှိမှုသည် ကျပ် ၁၆၆၇ ဒသမ ၂၈၁ ဘီလီယံရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ကောက်ခံရရှိမှုမှာ ကျပ် ၁၁၆၄ ဒသမ ၁၂၈ ဘီလီယံဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလထက် ကျပ် ၅၀၀ ဘီလီယံကျော် ပိုမိုကောက်ခံရရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၉ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၁၀၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းမည့်အချိန်ကို တစ်လ နောက်ဆုတ်ရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
မြန်မာအစိုးရမှ လူမှုအသိုက်အ၀န်း ၃၉၀၀၀ကျော်နှင့်အိမ်ထောင်စု ၂၆၅၀၀၀ကျော်အား Digital – T2 Set – Top – Box အလုံး ၃၀၄၀၀၀ကျော်အခမဲ့ပံ့ပိုးကုညီပြီး TVများအား Digital စနစ်ကူးပြောင်းခြင်းကိ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုသိရှိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၈ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒါကာမှ ရန်ကုန် တိုက်ရိုက်ပြေးဆွဲမည့် Biman လေကြောင်းလိုင်းသည် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်တွင် စတင်ပျံသန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၇ ။ မြန်မာနိုင်ငံသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအသီးသီးတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပစ္စည်းများကို CB Bank Payment Gateway အသုံးပြု၍ အွန်လိုင်းမှ စတင်ရောင်းချနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စနစ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ငွေပေးချေရန် သို့မဟုတ် ငွေလက်ခံရန် Online Payment Gateway (CB Bank မှ လုပ်ဆောင်မည်) ငွေစာရင်းရှင်းရန်နှင့် ငွေလက်ခံရန်အတွက် CB Bank ရှိ စာရင်းရှင် အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုဝင်ဘာ ၆ ။ KIO ဌာနချုပ် လိုင်ဇာတွင် နိုင်ငံလုံးအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် လိုင်ဇာမူဘောင်ပါ အချက်အများစုကို အစိုးရက သဘောတူ လက်ခံထားကြောင်း လိုင်ဇာမူ အကောင်အထည်ဖော်ရေး ညှိနှိုင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် နိုင်ဟံသာက ပြောကြားသည်။ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှ စတင်၍ နှစ်ရက်တာ ကျင်းပသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဘီဂျေနမ်ဘီးယား၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ လေ့လာသူ မစ္စတာဝမ်ရင်ဖန်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ခြောက်ဦး၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး UNFC အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၆ ဖွဲ့နှင့် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ MPC၊ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ MPC တို့ ပါဝင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
နိုဝင်ဘာ ၅ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရန် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ခြံစည်းရိုး ကာရံခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ၅၃ ဒသမ ၉၁၁ မိုင်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်း၊ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရဲနှင့် ပြည်သူအချိုးမှာ ၁ အချိုး ၉၀၀ ရှိသော်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်မူ ၁ အချိုး ၅၀၀ ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း နယ်စပ်လုံခြုံရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းက ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာ ၄ ။ မန္တလေးမြို့တော် အခြေစိုက် စာရေးဆရာ၊ ကဗျာဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာများ စုစည်းကာ အလွှာစုံပါဝင်သော မန္တလေး စာပေစကားဝိုင်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်န့မှ စတင်၍ တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ စကားဝိုင်း ဦးဆောင်စီစဉ်သူများထံမှ သိရှိရသည်။ မန္တလေး မြို့တော်တွင် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့သော ဓမ္မဗိမာန် စာပေဝိုင်း၊ ဟံသာဝတီ စနေစာပေဝိုင်းတို့မှာ မြန်မာစာပေ လောကတွင် ထင်ရှားခဲ့ဖူးသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂ ။ မြန်မာပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကို ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့်အပြင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုလုပ်သာ ကိုင်သာ ရှိစေရေးအတွက် ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ရာတွင် မတည်ငွေရင်း ပမာဏနှင့် ကနဦး ထည့်ဝင်ငွေ ပမာဏ ကန့်သတ်ထားရှိခြင်းများကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့် အာကာသပညာ တက္ကသိုလ်မှ BE (Aerospace proputsion & Flight vehicles) စက်နှင့် ပျံသန်းယာဉ် ပညာခွဲဌာနမှ နောက်ဆုံးနှစ် ကျောင်းသားများသည် DAWN SWAZ အမည်ပေးထားသည့် အဝေးထိန်းစနစ်သုံး လေယာဉ်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့ရာ အောင်မြင်စွာ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ။ ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက မော်တော်ယာဉ် နံပါတ်များကို ၄စလုံးမှစ၍ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးလျက်ရှိရာ နံပါတ်အဟောင်းများ ဖြစ်သော ၁က၊ ၂က နှင့် ၃က များကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်မောင်ဆွေက ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဦးရေ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်မှု တိုးတက်လာလျက်ရှိရာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ပြည်ပခရီးသွားဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် သြဂုတ်လ တစ်လအတွင်း ၄၉၂၆၀ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗင်နီဇွဲလား က ရတာ ၇ ကြိမ်ရှိပြီ ဆိုပဲ။
Top5ယောက်စလုံးတော်တော်လှပြီး စမတ်ဖြစ်တယ်။ ဗင်နီဇွဲလားရဲ့ အဖြေက ဟေ့ာဖြစ်နေတဲ့အခြေခံ အကြောင်းအရာလို့ထင်တယ်။biggest fear လို့မေးထားတာကို all fears လို့ပြန်ဖြေသွားတာလေးကြိုက်တယ်။Ecuador ရဲ့ Q n A ကိုတမင်များမထည့်တာလား။
ဘာလို့သူတို့တွေ ဘာသာပြန်ခေါ်လာတာလည်းမသိဘူး။ ဖိလစ်ပင်းက တော့ ဘာသာပြန်မပါဘူး။
စတီဗင်တိုင်လာကြီး စန်ဒယား ပေါ်တက်ပြီး သီချင်းဆိုလိုက်သေး။
မိုးစက်ဝိုင် မရတော့ ခရိုနီတွေ အောင်ပွဲ မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ဟီးးးး Russia ကလည်း ခရိုနီတွေမျက်နှာမှမထောက်။တောက်ခ်….။သူ့ဆီက လေယာဉ်ပျံ ကအစ လက်နက်ခဲယမ်း အကုန်လုံးအားပေးထားတာ။
စလုံးက ဗန်းထားတဲ့ website “Singapore bans Ashley Madison adultery website” “http://sg.news.yahoo.com/singapore-bans-ashley-madison-adultery-website-174247577.html”
ဆိုဗီယက်ပြိုလဲတော့… အဲဒီနိုင်ငံကသူတွေထဲ.. ဘိုမ(ရုရှားမ)ဖြူဖြူလှလှတွေ..ကမ္ဘာအနှံခြေဆံ့ကြရသလို… အမေရိကား..ဥရောပကနေ.. အဲဒီကမိန်းကလေးတွေကို..ကောက်ယူမွေးပြီးစားကြသပေါ့…။
အာရှမှာလည်း.. ဂျပန်..ဟောင်ကောင်းစသဖြင့်.. ရုရှားမလေးတွေရောက်လာပြီး.. ဖော်ချွတ်အကကလပ်တွေ… ပြည့်တန်ဆာတန်းတွေ.. စုံလို့အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်..။
ရုရှားကလေးတွေကိုလည်း… ကမ္ဘာအနှံ့ ခေါ်မွေးစားကြတာ… နောက်ဆုံး ရုရှားကနေ… အမေရိကန်တွေခေါ်မမွေးစားရဆိုပြီး… ဥအဒေပြု..ပိတ်ရတဲ့အထိပဲ..
ဒါတောင်… ဆိုဗီယက်ပြိုလဲပြီး… အနှစ် ၂၀ကျော်ကြာမှ…
တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပုံခြင်းကွာလို့ထင်တယ်။အောက်ကဆြာဂီတောင် အမျိူးစောင့်ဖို့ ၄ယောက်လောက်ယူမယ်ဆိုပဲ။
ကျန်တာကျ အကုန် အတုထုတ်ပီး ….
မိန်းမကျ အတုမထုတ်နိုင်ရော့သလား…. မျက်ရစ်မပါတဲ့ စိန က အေဘေးဒို့ရယ်….
(စောင့်လေမျိုးနွယ်တဲ့ခည… ၄ယောက်လောက် ယူမှ)
အမေရိကားကတော့.. ပြန်သုံးဆီ..ဆီတုတွေ ဘန်းပြီတဲ့ခင်ဗျ..
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့သူ လူပေါင်း ၈၀ အား ကွန်မြူနစ် အစိုးရက လူသိရှင်ကြား ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်း ရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်ကို Joong Ang Ilbo သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့အထိ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အရံရွှေ ပမာဏ
၇ ဒဿမ ၁၅၃၉ တန်နဲ့ နိုင်ငံခြားအရံငွေ ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒဿမ ၁၃ ဘီလီယံ ရှိတယ်လို့ ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ ဒုဥက္ကဋ္ဌက ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။
ရွှေစင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်မှာ သိမ်းဆည်းထားပြီး နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုတော့ ဗဟိုဘဏ်နဲ့ ပြည်တွင်းဘဏ်တွေမှာ ငွေသားအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘဏ်တွေမှာ ဘဏ်အကောင့်တွေအနေနဲ့ လည်းကောင်း ထားရှိတယ်လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
ရှေ့ဆက် အတည်ပြုချက်တွေကို စောင့်ကြည့်နေပါအိ
လုမ္ဗိနီဒေသမှာ အသစ်တွေ့ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းကို Carbon Dating နည်းပညာနဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ရာ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူတာ သတ်မှတ်ထားတာထက် နှစ်၂၀၀လောက်စောမယ်လို့ ယူဆကြပါကြောင်း…..
နာမည်ကျော် National Geographic မဂ္ဂဇင်းက ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာနေရာအဖြစ် ထင်ရှားပြီး ဘုရားဖူးများ လာရောက်ကြသည့်နေရာဖြစ်သည့် နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗီနီရှိ မာယာဒေဝီကျောင်းတော်တွင် ဘီစီ ၅၅၀ ခန့်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည့် ရှေးအကျဆုံးသော အထောက်အထားများကို ရှေးဟောင်း သုတေသန မြေတူး ပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သတင်းပေးပို့ထားသည်။
“ဗုဒ္ဓဟာ ဘယ်ကာလမှာ နေထိုင်သွားခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို အကြီးအကျယ် အချေအတင် ငြင်းခုန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ခုအချိန်မှာ ကျနော်တို့ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ တည်ဆောက်ပုံကတော့ ဘီစီ ၆ ရာစုလောက်ကို ညွှန်ပြနေပါတယ်” ဟု လေ့လာသူအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Durham တက္ကသိုလ်မှ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် Robin Coningham က တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော Antiquity ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းက ဆိုသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာကြီးများထဲက တခုဖြစ်ပြီး ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ သန်း ၃၅၀ ကျော်ရှိပြီး အများစုမှာ အာရှ အရှေ့ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။
ရိုးရာယုံကြည်မှုအရ လုမ္ဗီနီတွင် သည် ဗုဒ္ဓ၏ မယ်တော်ဖြစ်သူ မာယာဒေ၀ီက သစ်ပင်တပင်ကို ဆုပ်ကိုင်အားယူရင်း နောင်အခါ တွင် ဗုဒ္ဓဖြစ်လာမည့် သိဒ္ဓတ္ထ ဂေါတမ မင်းသားကို မွေးဖွားခဲ့သည့် ဥယျာဉ်နေရာဖြစ်သည်။
ဘီစီ ၂၄၉ ခုနှစ်မှ စ၍ လုမ္ဗီနီသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားရာဖြစ်သော သံဝေဇနိယ လေးဌာန အနက်မှ တခု ဖြစ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အာရှတလွှားသို့ ပျံ့နှံ့အောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အိန္ဒိယ ဧကရာဇ် အသောကက ဘီစီ ၂၄၉ ခုနှစ်တွင် ကဗ္ဗည်းကျောက်တိုင် စိုက်ထူ၍ အလေးအမြတ်ထားရမည့် နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
လာရောက်ကြည့်ရှု့ကြသူများကိုလည်း အတားအဆီးမဖြစ်စေဘဲ Robin Coningham နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက UNESCO အဖွဲ့ ဂျပန်နှင့် နီပေါအစိုးရများ၏ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုဖြင့် လုမ္ဗနီမှ အခြေအနေများကို မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသောက ခေတ်လက် ကျန် အုတ်လွှာများ အောက်ကို တူးဖော်ပြီး သမိုင်းကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကို အမျိုးသား ပထ၀ီဝင်အသင်းကြီး (National Geographic Society) ကလည်း ထောက်ပံ့ ကူညီပေး နေသည်။
နိုင်ငံတကာ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်များ ပါဝင်သည့် အဖွဲ့က လက်ရှိကျန်နေသည့် ဘုရားကျောင်း၏ အုတ်ရိုးများ အောက်ဖက်ကို တူးဖော်ပြီး လေ့လာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ မာယာဒေဝီကျောင်းသို့ နှစ်စဉ် ဘုရားဖူးများ သိန်းနှင့် ချီ၍ လာရောက်ကြသည်။
“ကျနော်တို့ ဒီနေရာကို လေ့လာစူးစမ်းဖို့ အခွင့်အရေးအလုံးစုံနီးပါး ရရှိထားပါတယ်။ နောက်မျိုးဆက်တွေ ထပ်ပြီးတော့ လေ့လာစရာ မလိုတော့လောက်အောင်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အလုပ်တွေကို ဘုရားဖူးလာသူတွေ ရှေ့မှာပဲ ထင်သာ မြင်သာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း ကျနော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတာကို လိုက်ကြည့်ကြပါတယ်” ဟု Coningham ကပြောသည်။
တူးဖော်လေ့လာကြည့်မှုအရ အဆောက်အဦ၏ အုတ်ရိုးနံရံများ အောက်ဖက်တွင် ပို၍ ရှေးကျသော သစ်သားထည် အဆောက်အဦ ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ထို့ပြင် လက်ရှိ ပုံစံသည် မူလက သစ်သားဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည့် အဆောက်အဦ၏ ပုံစံကို ပုံတူကူးယူ၍ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း Coningham က ပြောသည်။
ဘုရားကျောင်း၏ အလယ်တွင်တူးဖော်ကြည့်သည့်အခါ သစ်ပင်ကို ၀ိုင်းပတ်ထားသည့် သစ်သားအကာအရံများ စိုက်ထူ ခဲ့သည့် ကျင်းများကိုတွေကြရပြီး ဘီစီ ၅၅၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဖြစ်သည်ဟုလည်း Coningham ကဆိုသည်။ အုတ်နှင့် ဆောက်လုပ်ထားသည်နေရာများ တွေ့ရသည်ဟုလည်း သိရသည်။
အမိုးမရှိသော ဘုရားကျောင်း၏ အလယ်တွင် သစ်မြစ်များ၏ ရုပ်ကြွင်းများတွေ့ရပြီး လူအသွားအလာများသဖြင့် ချောမွေ့ နေ သော ရွှံ့ခင်းကြမ်းပြင်က ၀ိုင်းပတ်ထားသည်။ အထွဋ်အမြတ်ထားသည့် သစ်ပင် သို့မဟုတ် ဗောဓိပင်ဖြစ်ဖွယ်ရာရှိသည်ဟုလည်း သိရသည်။
ညောင်ပင် ကိုးကွယ်မှုကို ရှေးဟောင်း အိန္ဒိယ အစဉ်အလာတွင်တွေ့ရသော်လည်း ယခုသစ်ပင်တွင် အခြားသော အလား တူ နေရာမျိုးများလို ဆည်းကပ်ပူဇော်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် အရိပ်လက္ခဏာ မတွေ့ရဟုလည်း သိရသည်။
“အဲဒီမှာ အရမ်းသန့်ရှင်းနေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အစဉ်အလာဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ရိုသေမှုကို ဒါက ဖော်ပြနေတာ ပါပဲ” ဟုလည်း Coningham က ပြောသည်။
သစ်ပင်နေရာကို တူးဖော်စစ်ဆေးပြီးနောက် ဘီစီ ၁၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Coningham က ပြောသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဲ့သို့ အနေအထားမျိုး အဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ချိန်မှာ ဘီစီ ၆ ရာစု တွင်ဖြစ်နိုင်သည် ဟုလည်း သိရသည်။
သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း ဖြစ်သည်ဆိုသည့် ပြောဆိုချက်ကိုလည်း သူက သတိပေးခဲ့သည်။
“သစ်ပင်ကို ကိုးကွယ်တာ၊ ယဇ်ပလ္လင်ကို ပူဇော်တာက ရှေးဟောင်း အိန္ဒိယကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမှာ နေရာတိုင်းတွေ့နေကျ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေနဲ့ နဂိုရှိပြီသား ရိုးရာအစဉ်အလာ ကြားမှာ ထပ်တူဖြစ်နေတာတွေရဲ့ အတိုင်းအတာကို ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် သက်တမ်းရင့် သစ်ပင်တွေကို အလေးအမြတ်ထားတာက ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်မှု ကြားမှာ အဆက်အစပ်မရှိဘူးလို့ ယူဆမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်” Julia Shaw ကပြောသည်။
အခြားပညာရှင်များက တွေ့ရှိမှုကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသော်လည်း ထပ်မံ၍ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ ရှေးအကျဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်အဦးတခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု အဖြစ် အလျင်စလို သတ်မှတ်လက်ခံခြင်း မပြုရန် သတိပေးခဲ့ကြသည်။
“ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်တွေက သူတို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိတာဟာ ရှေးအကျဆုံး ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး လို့ ပြောချင်ကြတယ်လေ”ဟု အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Leicester တက္ကသိုလ်မှ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင် Ruth Young က ပြောသည်။
ဗျို့စ်.. မာမွတ် ရှာပွတ်စ်.. အဲ့ရာ ဘိုလုပ်ကြမီဒုံး..
​အော်​… ပိဋကတ်​နဲ့ အစဉ်​အဆက်​မှတ်​သားရွတ်​ဆို ကျက်​မှတ်​ပြီး သံဃာယနာတင်​ခဲ့တာ​တွေကို
ဒီနေ့.. Black Friday နေ့ပါ..